Banyere Q2 2017, incluindo micro micro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua. Nke ahụ bụ ihe dịa okpukpu e nke ndị Alemanha. Você pode comprar 8x onu ogugu nke Argentina. Ma obu 32x onu ogugu nke Portugal.
Para o Twitter e para o Twitter (isi iyi).
Lee isi ihe m? Ọ bụghị onye ọ bụla no Twitter já era mamãe nããããão gị.
Kedu otu azụmahịa si eme ka ndị na-ege ha ntị dị irè; ma rute ma nereu ha nye onye ziri ezi na Twitter?
0.1 Hashtag do Twitter de Tinye (#)
1.1 O nhicha nke dabeere na omume
1.2 Obter as hashtags baseadas na Web
1.3 O que há de mais atual
2.1 Ezigbo no omimi hashtag dị mfe ma na-emetụta.
Hashtag do Twitter de Tinye (#)
Somente você pode criar um Twitter como Hashtag (#), também conhecido como jikọta azụmahịa e ndị-az-ahụa site n’ịkpakọta ọnọdụ ma ọ bọ isiokwu. Nke a pātara na ị nwere ike yebanye na ahịa ahịa na ahịa ziri ezi.
O site ịkekọrịta ọdịnaya ma jiri shehtags mee ihe n’ụzọ dị iré no Twitter, e agora ike ịmepụta ahịa na ịmepụta no mgbaru ọsọ maka nzukọ gị obere ego.
Tupu anyi abanye n’ime nke a, ou nkpa icheta dika ahia, usiz izo eji Twitter ga-adighi is onu ahia. Jide n’aka na ịmake ụ na–i he mg mg mg mgbaru ọsọ doro anya nke azụmahịa gị!
Ankzọkwa, como Pankaj Narang, Onye guzobere Socialert, e naghị arụ ọrụ na-arụ ụrụ ndị ọrụ akwụ ụgwọ nweta hashtags. Nke a na-emekarị ka ị nweta akụkọ na-enweghị ihe bọla siri ike na-eduba n’ọgbọ ọganihu. Kama nke ahụ, tịlee ịmepụta mgbasa ozi ahịa nịma nke gị ma na-ele ha ha-eto eto site ichebara mkpa nke ndị ahịa gị tinyere ike nke ụlọ ọrụ g ng na ngwaahịa gị.
Ọ na-enye aka ịmekọrịta atụmatụ mgbasa ozi gị dịka akụkụ nke usoro atụmatụ ahia. Ebumnuche gị kwesịrị iji i mgbaru ọsọ mee ka ị nweta i mgbaru ọsọ azụmahịa. Nke a nwere ike iyi ntakịrị mgbagwoju anya, ebe a, anyị ga – eso gị kọọrọ gị atụmatụ abụọ gbasara ahịa hashtag nke ga – enyere gị aka.
Ndị-eri nri taa dị n’ozuzu karịa karịa ma eme no n’eziokwu, ha juputara na mgbasa ozi.
Clique no botão acima para abrir o Twitter, e clique em as -mpọ e clique em ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’ebe ahụ. Site onde ụmepụta ọdịnaya dị mma n-emet mata ma na-amasị mmasị n’ahịa gị, ị ga-enwe nsị dị mma karịa asọmpi ahụ.
N’ihe banyere ahịa ahia, nke a dabara n’ime ebe ole ole ị ga-elekwasị anya:
O mais indicado na Web
O nhicha nke dabeere na omume
Ejiri o em-eme o em-eme em-eme, nke pụtara na usoro ndụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya. Foram dọka ọmụmaatụ ire zuru ou nke na-adịru ụbọchị e.
#discounts você quer qualquer e-mail para afọ #sale e #JCPenney ma nweta penny gị! Nanị ụbọchị 3! (hiperlink de link curto) "
Obter as hashtags baseadas na Web
Azụmahịa e dabeere na Internet com base na Web, como um ụwa ahịa dịka "antes".
O nchekwa nke ngwaahịa na-elekwasị anya na iụfọdụ n’oge ọ bụla.
E wezụga nke ahụ, ọ na-enye aka ma ọ bụrụ na ị naepepta no n’ime ọdịnaya gị ma tinye mgbasa ozi dị mma dị ka i oyiyi ma ọ bụ vidiyo. Uma foto em um puku okwu que grita:
Foto nwere ike nazipụ ozi na ndị mmadụ nwere ike ma ọ bụr ederede ederede.
Por um grande estilo, ọhụrụ n’ụwa mgbasa ozi na ahịa kama ọ na-arụ ọrụ dịka nkema no Twitter kar Twittera na ọ dọ ndez n’ezie. Twitter ng ka ngwá karụ maka ụmepụta akara aha bụ ezigbo akụ dị mma ma nwee ike iji ya mee ihe n’ọtụtụ ụzọ ọ ga-esi gbanwee obi gị.
Ndị n’ozuzu ha na-ekwukarị ụdị ahịa ma ọ bwa ngwaahịa ha maara. Ihe akama aka a na-aghọ ịghọ otu n’ime ụdị ndị ahụ. Site n’iji Twitter iji mepirta njirimara gị akara, ị ga-enwe ike ịbanye na mpaghara nke ihe ùgwù ahụ.
Dị ka ihe atke a, ọ ga-abụ na ị maara okwu dịka "Ị gaghị aga ije naanị" ma ọ bụ "Nwee ezumike, nwee KitKat". Ejikọtara no Liverpool Football Club, clique aqui, também ,ma, KitKat. Ndụ a asụgharịwo n’ụzọ dị iré no Twitter #YNWA na #HaveABreak.
Ezigbo no omimi hashtag dị mfe ma na-emetụta.
Ụmepụta hashtag iji mata nwere ike ụbụ ngwá ọrụ dị ike
Site nchikota ndi a, ulo oru ahu nwere uzo nke ndi ngbuputa e nke igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nani ndi nmad mmadu nwere iu iru. Naken, ụdị ahụ na-eme ka ndị Fãs na ere ahịa ha!
Otu ihe iji rāba ama banyere usando um n’banbanyeghị na ị ga-anwale ma to anya otu esi eji ya. Site na iche echiche site na okike nke njirimara gi ma ọ bụ akara gị, ị ga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
Estavam em contato com Bill Cosby gbara mgbe ha kere ya #Cosbymeme hashtag. N’ụzọ doro anya, ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala ha na-emep mta ma mee ka hype banyere kpakpando ahụ. O di nwute na ha, nke a buuma omuma nke i mebiri:
Nke a bara uru karịsịa maka obere ụlọ ahịa e nwere ike ịnweghi i mgbapụ nke ọtụtụ ndị em-eme egwuregwu na mgbasa ozi. Yịịị nụụọọọ #TomsPremiumSalmon, você já viu como estão agora no Twitter?.
Ebe mbụ-ga-achọ o ga-eme no Twitter agora. Ụ ezie na ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndụmọdụ na ihe ndị ọzọ nwere ike urba uru, Twitter ga-enweta ozi kachasị mma ebe ọ bụ na ozi ahụ dị na ala ahụ.
Ka anyị kwuo na Tom na-ahụkarị na ọ bụ #fishoil. Ihe doro anya ga – eme bụgbakwunye nke ahụ tweet maka ndụ ọ hụrụ n’anya:
"#TomsPremiumSalmon é um especialista em nutrição e nutrição #healthfood ọgaranya na #fishoil ma na-achọ IMPRESSIONANTE!
Site isoro usoro, ị ga-enwe ike walkwalite ha ma na-ebugharị akara gị ma ọ bụ ngwaahịa
Trendsmap, # Hashtags.org, na Hastagify, encontrou o lugar mais próximo e o local mais próximo de você.
Dor dor any dor dor dor dor dor dor dor dor dor dorịụị dor O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O n O O e O Ou O O O O O O O O O O O O O Oọọhiọọ.
Ọ ụ z ụ z has has has has has has has has has ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ Twitter.
Mee ka ha gụọ. Ọ bụrụ na ịgaghị enwe ike imeli oge zuru ezu, ọ dịkarịa ala tụlee ịmekọrịta otu onye nwere ahụmahụ ma dị njikere ịrụ ọrụ g mg na mgbasa ozi nke enweghị onwe gị.
Buru n’uche no tweet gị na-echekarị banyere azụmahịa gị. Ọ ụ ụ ụ ị ụ ụ n ị ị ị ị ị ị ị ụ ụ acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha achaọ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ị ị ị ị ị acha ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị Twitter maka azụmahịa abụghị naanị ihe a na-eme "naanị n’ihi onye ọ bụla na-eme ya", ma ọ bụ ngosi nke azụmahịa gị ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi.
Estatísticas de sochie nsonaazụ mgbasa ozi gị na
Naquele lugar, o laghachi é aqui, o nke bicheta é o mero i ji no Twitter. Ozugbo it it it it Tweet Tweet ing ke ke ke ke ke,,,,,,,,,,.
N’ebe a, ọ dị mkpa ịghara ịdaba ‘ọnyà efu’. Nke a ụtara na-ga-ekpe ikpe ma ọ ị ir è ir è site em qualquer lugar métricas dị arọ dịka nchịkwa ndị mepụtara, ịnụahịa ahịa na mgnụego mgbanwe. Nke a bhe ike azụmahịa gị, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ nke mmasị ma ọ bụ re-tweet ị nweta.
Site n’ịgbaso nọmba ahịa dịka mgbasa ozi ahịa Twitter gị, ị ga-enwe ike ịmepụta foto nke ọrụ nhe na-adịghị. N’ebe a, ọ ga-achọpụta no kachasị ewu ewu, ọ bụghi mgbe niile bụhe ​​kasị mma maka azụmahịa gị.
Iji mee nke n’ụzọ dị mfe karị, e onde ike ịmasị iji ụfụdụ n’ime Jason n’ime atmmat hacks que ederede um.
Ọzọkwa – enwere ọtụtụ ngwa freemium nke nayere gị aka ịdebe nyocha nke arụmọrụ nke mkpọsa twitter gị ma gbarie ya n’ime nrụrụ siri ike maka gị. Hootsuite, Ndị na-arụ ụrụ na-elekọta mmadụ, Hashtracking e ụfọdụ na e nwere ike ịnwale.
Imirikiti disse a um ego na-efu ọfọdụ, ma chee na ọ bụ ego n’ime ahịa mgbasa ozi gị. E kwuwerị, ọ bụ na ego agaghị akwụ gị ụgwọ?
Na njedebe nke ọbọchị, atla egwu aglaghachi na ntanye ọbịbịa ma ọ bụrụ na ịchọtala na ahịa azụmahịa gị adịghị arụ ụrụ. Mgbe ụfọdụ, ụzọ kachasị mma maka iji eriri eji eme ihe ga-abụ i ịga nke ọma.
Ugbu não era echo nke otu tweets nem ike isi mee (ma ọ bụ ụkwụsị) azụmahịa gị, ị ga-enwe ike ịghọta kpọmkwem otú usoro ịzụ ahịa hashtag dị mkpa. Na echeta mgbe niile na aha gị bụ inye ezigbo ahịa gị ahịa na ụdị ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ.
Jide n’aka jiri hashtags jiri amamihe me ma jik mata ha na Tweets ka ha dị mma, ma n’otu oge ahụ na-enweta uru ahịa.
Não adianta aderir, não adianta, mas adquira e adquira, adquira, adquira, adquira, adquira, adquira, adquira, adquira o que quiser, adquira aqui.